Mmeputa Akụkọ |
Kpọọ Anyị: + 86-13505845336
Kedụ ihe ị ga - elezi anya iji mebe nkpuchi
site na nhazi na 20-07-13
Na mgbakwunye na ihu na azụ n'akụkụ ndị a kpọtụrụ aha n'elu, yana ugboro ole ị ga-anọchi, ịkwesịrị ị paya ntị na ịcha mkpuchi: Jiri aka gị tupu ịkpụ ihe nkpuchi, gbalịa izere iji aka gị metụ ihe nkpuchi ahụ; E eyila ihe na-ezighi ezi, nke dị mma na nke na-adịghị mma, ekwekwala…
Ugboro ole ị na-eyi nkpuchi ma gbanwee ya
Ọ bụrụ na ihe mkpuchi ahụ mebiri emebi ma ọ bụ metọọ ya, a ga-edochi ya ozugbo enwere ike. Ọ bụrụ na anaghị emetọ ya, naanị iji rụọ ọrụ nchebe na ebe ndị mmadụ na-anọghị, ọ bụghị ebe a na-agwọ ọrịa: Masks ọgwụ ndị a na-atụfu: "Wepụ kọntaktị ihu, imi na imi = otu oge ọzọ", tụfuo mgbe…
Otu esi amata ihu na azu nke nkpuchi
Achọrọ masks n'oge ọ bụla n'oge ntiwapụ nke ọrịa, yabụ kedu ka ị ga-esi mata ọdịiche dị n'ihu na azụ nke ihe ndị nwere ike iwepu na akwa ọcha? Ọzọ, m ga-egosi gị nhụ ụzọ dị iche iche n'ihu na azụ nke ihe ndị nwere ike idobe (1) Site n'ọnọdụ agba, akụkụ dị agba ọchịchịrị n'ozuzu ya bụ f ...
Gịnị ka ndị nwere ike iwefu diski pụrụ ịme
Nke mbu: hichaa ihe ndi ozo. N'ikwu okwu n'ozuzu, a na-eji akwa a kpuchiri ekpuchi a. Ngwa a nwere ike ghara isi ike dika owu na ihe ndi ozo, ma ihe a nwere uru abuo: mmiri adighi enye ya mmiri ma obughi oke ogwu. Maka rags na-amịkọrọ mmiri dị ukwuu ma na-ete ntutu ...
Alaka ndị dị na Vietnam
N’afọ 2019, anyị hibere ngalaba abụọ na Vietnam maka ịgbasawanye azụmahịa ụlọ ọrụ. Otu dị na Hanoi nke bụ isi obodo Vietnam, ebe anther dị na Ho Chi Minh obodo ebe ego na azụmaahịa dị na Vietnam. Anyị goro ụfọdụ ndị ọrụ obodo na ụfọdụ ndị ọrụ China maka pr…
Somefọdụ na-enye ndụmọdụ maka iji sọks kpochara
site na nhazi na 20-07-10
1. Jiri ihe nkpuchi pụrụ iji kpuchie imi na ọnụ, belata oge dị n'agbata ihu na nkpuchi. 2. Zere ịmetụ nkpuchi ahụ mgbe ị na-eji. 3. Dochie ihe nkpuchi gị mgbe ọ mmiri mmiri ma ọ bụ metọọ. 4. Gbanwee nkpuchi gị kwa oge ọ bụla dị ka elekere anọ nke anọ. 5. Ghichaa aka gi mgbe i wepu ihe nkpuchi eji ekpofu. 6. Mee…
Maka ajụjụ gbasara ngwaahịa anyị ma ọ bụ ndị na-ere ahịa, biko hapụ email gị ka anyị ga-akpọtụrụ n'ime awa 24.ajuju
ụlọ ọrụ mpaghara tangqiaotang zhang jiagang obodo china